I-Google AmaSpredishithi - dala uphinde uhlele amaspredishidi ku-inthanethi, mahhala.
Iya ku-Google AmaSpredishithi
Dala amadokhumenti Kim amaspredishithi
Dala amaspredishithi anamandla U-Jake
Nge-Google AmaSpredishithi, ungadala, uhlele, futhi uhlanganyele noma kuphi lapho ukhona. Mahhala.
Iya kokuthi i-Google AmaSpredishithi Landa i-Google AmaSpredishithi
I-Google AmaSpredishithi oyithandayo enokuvikeleka okwengeziwe nokulawula kwamathimba.
I-Google AmaSpredishithi yenza idatha yakho ivele ngamashadi namagrafu anemibala. Amafomula akhelwe ngaphakathi, amathebula ephivothi nezinketho zokufometha ezinemibandela zilondoloza isikhathi futhi zenza lula imisebenzi evamile yesipredishithi. Konke mahhala.
Thola amaspredishithi akho noma yikuphi, nganoma yisiphi isikhathi
Finyelela, dala, futhi hlela amaspredishithi akho noma yikuphi lapho oya khona —ukusuka kufoni yakho, ithebulethi, noma ikhompuyutha — ngisho noma lungekho uxhumano.
Landa uhlelo lokusebenza le-Android
Thola AmaSpredishithi e-iPhone ne-iPad
Landa i-Google AmaSpredishithi
Yenza okuningi, ndawonye Nge-Google AmaSpredishithi, wonke umuntu angasebenza ndawonye kusipredishithi esifanayo ngesikhathi esifanayo.
Yabelana nanoma ubani Chofoza okuthi yabelana futhi uvumele noma ubani—abangani, ofunda nabo, osebenza nabo, umndeni—abuke, abeke amazwana noma ahlele isipredishithi sakho.
Hlela ngesikhathi sangempela Lapho othile ehlela isipredishithi sakho, uyakwazi ukubona ikhesa yabo njengoba benza izinguquko noma begqamisa umbhalo.
Xoxa futhi beka amazwana Xoxa nabanye ngokuqondile ngaphakathi kwanoma yisiphi isipredishithi noma engeza amazwana ngokuthi “+” ikheli labo le-imeyili futhi bazothola isaziso.
Ungaphinde ushaye okuthi “londoloza” futhi
Zonke izinguquko zakho zilondolozwa ngokuzenzakalelayo njengoba uthayipha. Ungakwazi ngisho nokusebenzisa umlando wokubuyekeza ukuze ubone izinguqulo zesipredishithi esifanayo, esihlungwe ngedethi nokuthi ubani owenze ushintsho.
Vula, hlela, futhi londoloza amafayela e-Microsoft Excel files ngesandiso se-Chrome noma uhlelo lokusebenza.
Guqula amafayela e-Excel abe i-Google AmaSpredishithi kanye nokuphambene nalokho.
Ungakhathazeki ngamafomethi efayela futhi.
Sebenzisa iphaneli ethi Hlola ukuze uthole ukubuka konke kwedatha yakho, ukusuka kuzifinyezo ezizuzisayo kuye kukukhetha kwamashadi agcwaliswe kusengaphambili ongakhetha kuwo.
Yenza okuningi ngezengezo
Thatha okuhlangenwe nakho kwakho kokuthi AmaSpredishithi kude nakakhulu ngezengezo. Zama isengezo esithi Izitayela ukuze ulethe iphophu eyengeziwe kusipredishithi sakho esilandelayo.
Bona ukuthi yini enye ongakwazi ukuyengeza
AmaSpredishithi akulungele ukuhamba uma wena usukulungele. Dala kalula isipredishithi ngesiphequluli sakho noma landa uhlelo lokusebenza ledivayisi yakho yeselula.
Thola i-Google AmaSpredishithi
Thola AmaSpredishithi e-Android